शारीरिक रुपमा अशक्त होममायाको घर बनाउन एक लाख ३९ हजार जुट्यो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
शारीरिक रुपमा अशक्त होममायाको घर बनाउन एक लाख ३९ हजार जुट्यो
Published On : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १०:२७
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर २ सादीखोलाकी ४५ वर्षिय होममाया थापालाई सहयोग जुट्न थालेको छ ।
शारीरिक रुपमा अशक्त होममायाको दुःख बारे समाचार प्रकाशित भएपछि देश बिदेशबाट सहयोग जुट्न थालेको हो । घर नहुँदा कष्टले टहरामा गुजारा चलाउँदै आएकी उनलाई घर निर्माण गरिदिन स्थानीयले सहयोग अभियान सुरु गरेका छन् । उक्त अभियान अन्र्तगत अहिले सम्म एक लाख ३९ हजार रकम संकलन भईसकेको अभियान्ता एवं स्थानीय शिक्षक मदन पन्तले बताए ।
गण्डकी गाउँपालिका २ का वुद्धी पन्तले १५ हजार पाँच सय ५५, का दिपक रेग्मीले १५ हजार ७६, बमबहादुर गुरुङले १० हजार २८, प्रेम पन्तले १० हजार एक सय एक, शहिदलखनका मनोज श्रेष्ठले ११ हजार सहयोग गरेका छन् । १५ जना ब्यक्तिहरुबाट उक्त रकम संकलन भएको हो । बिदेशमा रहेका, स्थानीय समाजसेवी, ब्यवशायीहरुबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको शिक्षक पन्तले बताए । यस अघि उनलाई जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले खाद्यान्न, कपडा, सहित नगद ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराई सहितको टोलीले घरमै पुगेर उनलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उनको खुट्टा चल्दैन । हातपनि एउटा मात्रै चल्छ । घिस्रिएर हिड्छिन् । परिवारमा उनी एक्लो छिन् । उनलाई निकै शकस छ । गत वर्ष आमाको मृत्यू भएपछि निकै शकस झेल्दै आएकी उनलाई गुजारा चलाउन निकै दुःख छ ।